Ensmụ nwoke ọhụrụ igwe eji agba ọkụ eletrik | ebike Shuangye
Mbido ngwaahịa igwe eletrik eletrik igwe eletrik Mens ndị ọhụrụ eletrik eletrik A6AB26
Moto: 36V 250W / 350W / 500W Hub Motor
Ngosiputa: Ihu LCD
Breeki: N'ihu & N'azụ Disks
Taịa: Ọpụpụ 26 * 1.95 / 27.5 * 1.95 / 29 * 2.1 inch
Okpokoro: Alloy Alloy
Saddle: sadulu Mountain
Chaja: Smart Charger
Sticker ： Hotebike (nwere ike OEM)
Ensmụ nwoke ugwu ọhụrụ igwe kwụ otu ebe
Iji meziwanye arụmọrụ ndụ ndị ọzọ, nke a igwe eletrik eletrik na 250w-500w brushless motor, 21 gbapụrụ ọsọ na batrị 36v batrị. Ma ugwu, obodo, ugwu na ndị ọzọ, ha niile nwere ike igbo mkpa gị.
Bathi lithium batrị batrị 36V10AH, igbe batrị bụ nke mbughari wee nwee ike ịkwụ ụgwọ ya igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ iche iche n'ime ụlọ gị.
PAS Riding System, 5 ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ, 1: 1 pedal aka, na-achịkwa ọtụtụ ọrụ LCD ngosi. Chekwa ọkụ eletrik na ịgbatị ndụ batrị. Ị nwere ike ma ọ bụ na-agba ọsọ na ọnọdụ pedals ma mkpịsị aka aka. Ị ga-ada n'ime ịhụnanya na igwe eletrik anyị.
Front na azụ 160 diski breeki, chebe gị pụọ na ihe ọ bụla mberede na nkwụsịtụ anya n'ime mita 3. Jikọọ na nkedo ejiji nke bụ ọkụ ọkụ na-apụ apụ mgbe ị na-egwu ụkwụ. Nchekwa nke ịgba ígwè ka mma.
Mgbapu na-enweghị ntụpọ, nye 250W / 350W ọsọ ọsọ ọsọ na-enweghị moto, ọsọ ọsọ dị 25-30km / h. Ọ dị ike. ka ị ghara iche banyere ugwu ma ọ bụ na ifufe.
Igwe ngosi LCD dị iche iche, nke e mepụtara na ụlọ ọrụ anyị, dị mfe ịchịkwa àgwà ahụ, nwere ike igosi Ogo, Mileage, Okpomọkụ, Voltage, Error code na ndị ọzọ. Ị nwere ike mfe iji ya na akwụkwọ ntuziaka ahụ.
More igwe kwụ otu ebe eletrik: 26 nke anụ ọhịa ahụ na-ere ọkụ ọkụ eletrik, ugwu igwe eletriki igwe, ezumike nkpuchi elu igwe eletrik, bafang mid-moto moto eletriki, 48v elu ugwu ugwu ebike
Tags:ndị igwe eletrik igwe eletrik eletrik igwe eletrik ọhụrụ
Mbụ: Nnukwu igwe eletriki igwe eletrik ígwè Magnesium maka ire ere A6AB26M
Next: Nnukwu ọkụ eletrik 26 nke eletrik igwe eletrik A6AH26-S